fishing - Synonyms of fishing | Antonyms of fishing | Definition of fishing | Example of fishing | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for fishing
Top 30 analogous words or synonyms for fishing
ဖစ်ရှင်း (ကွန်ပျူတာ) Computer security လောကမှာတော့ phishing ဟာ ဥပဒေဖောက်ဖျက်တာ တစ်ခုပါပဲ။ credit card ရဲ့usernames,password များကို လိမ်လည်လှည့်ဖျား၍ဖြစ်စေ စိတ်ဝင်စားသည့်အရာကို ဆွဲဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်စေ online ပေါ်ကနေ ရယူသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ phishing ဆိုသည်မှာ fishing နှင့် pish ကို ပေါင်းထားသော စာလုံးပါ။ အခြား နာမည်ကြီး social website တွေ online payment processors တွေ ဒါမှမဟုတ် IT administrator တွေကို ရည်ရွယ်ပြီး တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ Phishing ကို ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ email ကနေ ထင်ယောင်ထင်မှား စာအနေနဲ့ဝင်ရောက်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ email ကနေတဆင့် website အတုအယောင်တွေ ရဲ့ link တွေကိုပေးပြီး တကယ့်အစစ်အမှန်လို့ ထင်အောင် ဖန်တီးတတ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် နာမည်ကြီး social website ရဲ့ ပုံစံအတိုင်းဖန်တီးပြီးတော့ users တွေကို ထင်ယောင်ထင်များဖြစ်အောင် လုပ်တတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ website ကို exploits လုပ်ပြီးတော့လည်း users တွေကို website အတုအယောင်တွေဆီ ပြောင်းခေါ်သွားနိုင်ပါတယ်။
စန်ကာကူကျွန်းအငြင်းပွားမှု Aside froma1945 to 1972 period of administration by the United States, the archipelago has been controlled by Japan since 1895. The People's Republic of China (PRC) disputed the proposed US handover of authority to Japan in 1971 and has asserted its claims to the islands since that time. The Republic of China (Taiwan) also claims the islands. The territory is close to key shipping lanes and rich fishing grounds, and there may be oil reserves in the area.
ရှိန်းကျိန့်မြို့ The city was originallyahilly area, with fertile agrarian land. However, after becomingaspecial economic zone in 1979, Shenzhen underwent tremendous change in landscape. The once hilly fishing village is now replaced by mostly flat ground in city center area, with only Lianhua Shan (Lotus Hill), Bijia Shan (Bijia Mountain) and Wutong Shan the only three places that have some kind of elevation as viewed from satellites. With the influx of migrants from inland China, Shenzhen is experiencingasecond stage boom, and it is now expanding peripherally and the hills in surrounding areas such as Mission Hills are now being levelled to make land for more development.